TORA Tupolev Tu-114 126 FSX & P3D - Rikoooo
Tupolev Tu-114 126 FSX & P3D mhando Special Edition
Downloads 4 920
Created 11-09-2015 02: 11: 00
Akachinja 06-09-2017 02: 17: 21
Munyori: Samdim Design, repack ne Andreas Rotowski
Hekuno Tupolev TU-114 uye TU-126 (126 ari AWACS womuenzaniso). pasuru Iri rinokosha shanduro yave akagadziridzwa zvakananga nokuda FSX kubudikidza Andreas Rotowski uye inosanganisira zvinhu zvakawanda reserved. The ndege kabhini iri modeled zvizere 3D uye anobvumira kufamba mukoridho. rongedza Izvi zvinosanganisira 3 mienzaniso uye 3 repaints, tsika mitinhimira (bhandi Seat, hapana smocking haizoshandisi) rakapotsa Cockpit uye kunzwisisa 2D remadziro.
Included zvizere mapepa muna Chirungu uye kuwanikwa zvakananga paIndaneti (Manual.html) Kana rongedza. Zvinokosha kuverenga Chinyorwa
The Tupolev-114 aiva Soviet turboprop airliner yakavakwa muna 1950s.
The Aeroflot, iyo kambani yacho USSR, aida kuva airliner inokwanisa akatakura huru dzakawanda kwokubatana uye kushumira somushumiri rwokugadzirwa showcase uye mumiririri. Ichibatsirwa vatyairi, kutsvakurudza weDhipatimendi Andrei Tupolev zvavo akaziva rinobva bhomba Tu-95. The Tupolev 114 anoramba chikuru uye uchitsanya turboprop mutakurwi ndege nokusingaperi kuvakwa. Rakanga simba mana turboprop Kuznetsov NK-12. Raishandiswa pamusoro huru mitsetse: Moscow-Havana, Moscow-Tokyo. Rakaitwa rakakurumbira nokuda kushanya Nikita Khrushchev kuUnited States muna 1959.
Akanga pachigaro kubudikidza chitarisiko refu dhonza ndege sezvo Ilyushin Il-62. (Wikipedia)
Tupolev Tu-114 126 FSX & P3D mhando Special Edition Download
Downloads: 79 705